Becky Lynch oo laga saaray Wrestllemania 35 mana wajihi doonto Ronda Rousey. Hadaba ogoow sabata iyo gabadha lagu badalay. – Filimside.net
Becky Lynch oo laga saaray Wrestllemania 35 mana wajihi doonto Ronda Rousey. Hadaba ogoow sabata iyo gabadha lagu badalay.
February 12, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Milkiilaha midowga WWE Vince McMahon ayaa dhamaadkii bandhigii RAW ee xalay sheegay in Charlotte Flair ay badali doonto Becky Lynch oo laga fogeeyay bandhiga Wrestlemania 35 isla markaasna ay wajihi doonto Ronda Rousey.
Becky Lynch ayaa aheyd gabadhii ku guuleysatay bandhigii Royal Rumble isla markaasna noqotay boqoradii Riingaha waxayna khayaar u heysatay in qofkii ay doonto wajahdo bandhiga Wrestlemania kaasoo dhici doono 7da bisha April.
Becky Lynch ayaa dooratay in ay suunka gabdhaha kula dagaalanto bandhigaasi gabadha la yiraahdo Ronda Rousey waxayse dagaal aanan u fiicneyn la gashay maamulka WWE iyadoo bandhigii SmackDown dharbaaxday maamulaha WWE qeybta fulinta Triple H si lamid ah waxay u gacan qaaday xaaskiisa taasoo ah gabadha milkiilaha midowga WWE ee Stephanie McMahon.
Vince McMahon ayaa sheegay in mudo 60 maalmood ah la ganaaxi doono Becky Lynch kadib xad gudubkii ay geysatay maadaama ay dharbaaxday nin ka xoog badan misna masuul ah isla markaasna aysan ciqaab la aan ahaan doonin.
Becky Lynch ayaa raali galin bixisay hase yeeshee Vince McMahon ayaa raali galintaas diiday asigoo sheegay iney isku maleysay qof WWE kaweyn sidaas owgeed ay ciqaabteeda mari doonto.
Hadaba akhristow side u aragtaa ganaaxa garka loo galiyay Bcky Lynch?
Waxaa Aqrisay 374